မျိုးမြင့်ချို: ကိုဗဆွေ (သို့မဟုတ်) လျှို့ဝှက်သောအပြုံး (ဒဂုန်တာရာ)
ကိုဗဆွေ (သို့မဟုတ်) လျှို့ဝှက်သောအပြုံး (ဒဂုန်တာရာ)
at 10:14 AM Posted by myo0comments
ကိုဗဆွေ (သို့မဟုတ်) လျှို့ဝှက်သောအပြုံး
ဒဂုန်တာရာ ၁၉ ၄၈ ဇွန်လ
တလောက ဆိုရှယ်လစ်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကိုဗဆွေနှင့် ကုန်သည် လမ်းရှိ ပြည်သူ့စာပေစာအုပ်ဆိုင်တွင် မတော်တဆသွား၍တွေ့လေသည်။
ကွဲကွာနေသည်မှာကြာပြီဖြစ်သဖြင့် ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်ထွေရာလေးပါး လျှောက်၍ပြောကြရင်းက တာရာတွင်ပါသော လူကိုလေ့လာခြင်းဆောင်း ပါးများအကြောင်းရောက်သွားရာ ကိုဗဆွေက `ကိုယ့်အကြောင်းရေးရင်တော့ ဗဆွေ သို့မဟုတ် ဂျပိုးလို့ ရေးပေါ့ကွာ၊ မဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ်က စင်စစ် ဂျပိုးပဲကွ …´ဟုပြောကာ သူ့ဘာသာသူသဘောကျပြီး ရယ်မောလျက်ရှိလေသည်။
ကျွန်တော်ကပြုံးနေစဉ် အပါးရှိ ဗိုလ်ခင်မောင်ကလေးက`အောင်ဆန်းကိုတော့ ခင်ဗျားက အရိုင်းလို့ ဆို တယ်။ သူကတော့ မယဉ်၊ မရိုင်းဗျ´ဟု ပြောကာ ရယ်နေပါလေသည်။
ကိုဗဆွေသည် ကျွန်တော့်ရှေ့ရှိစားပွဲတွင် တင်ပလွှဲထိုင်ကာ သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း၊ လက်ဝဲညီညွှတ်ရေး၊ စာပေနှင့်မာ့က်စ်ဝါဒ၊ ကာလပေါ်ဝတ္ထု၊ အိမ်ထောင်ရေးစသည်များကိုပြောပြလျက်ရှိစဉ် ကျွန်တော်၏ နားထဲတွင်ကား တဖြည်းဖြည်းဝါးဝါးလာပြီး သဲ့သဲ့သာကြားရတော့၏။
ပုံသဏ္ဌာန်တို့သည် မှုန်မှုန်မှေးမှေးလာကာ အသံသည်တိုးတိုးလာပြီး…အထပ်ထပ် ယှက်လိမ်ရက်ဖေါက်ထားသော ဖုံအလိမ်းလိမ်းနှင့်ပင့်ကူအိမ်ကြီးကိုထွင်းဖေါက်လျက် အဝေးရှိစိမ်းစိုသော ကမ္ဘာသစ်တခုသို့ ဟုတ်ကနဲရောက်သွားလေ၏။ လွင့်ပါးနေသော မြမြမောင်းသည့် သစ်ရွက်ယော်ကလေးများ၏ ရှပ်တိုက်သံများ … ၀ါတာတာ နီတီတီနှင့် တွဲလွဲဆိုင်းကာတင့်နေကြသော စိန်ပန်းပွင့်ရောင် … တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂရှေ့မှ ဗုဒ္ဓံသရဏံပင်များ … ၁၉၃၈။
စင်စစ် ကိုဗဆွေကို ဆယ်တန်းတွင်ကျောင်းတက်လျက်ရှိစဉ် (၁၉၃၆-၃၇)ကတည်းက သိခဲ့ပေပေ၏။ ထိုအခါက စစ်ကိုင်းကျောင်းဆောင်ရှိ မောင်စည်သူထံသို့သွားလည်ရင်း တဆောင်တည်းနေသူကိုဗဆွေနှင့် သွားတွေ့၏။
ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်းတွင်ပါသော ကျွန်တော်၏ ရတုပိုဒ်စုံ လူးတား၊ အေးချင်း၊ တေးထပ်စသောကဗျာများကို သူသည် ဖတ်ဖူးနေ၏။ သူ့ကိုလည်း ကဗျာလင်္ကာ စာပေ၀ါသနာပါသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖြစ်သိ၏။ သူသည် ဟိုက်စကူးတွင်ရှိစဉ်က ကျောင်းမဂ္ဂဇင်းများတွင် အယ်ဒီတာဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ တေးထပ်များစပ်ကြောင်းလည်း သိရ၏။
သူသည် သခင်နုခေါင်းဆောင်သော ၁၉၃၆ သပိတ်က ထားဝယ်ရှိကျောင်းသားများကို ကိုထွန်းအေး (နဂါးနီ)နှင့်အတူ ခေါင်းဆောင်ခဲ့၏။ ပဋ္ဌမကျောင်းသားများညီလာခံသို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တက်ခဲ့၏။
နောက်နှစ်တွင် ကျွန်တော်သည် တက္ကသိုလ်သို့ရောက်ကာ၊ စစ်ကိုင်းဆောင်တွင် ကိုဗဆွေနှင့် အခန်းခြင်းကပ်လျက် နေရ၏။ သူနှင့် ခင်မင်ကာ ရင်းနှီးလာ၏။ ရုပ်ရှင်သွားအတူ၊ မြို့ထဲသွားအတူနှင့် တတွဲတွဲနေခဲ့၏။
ထမင်းစားရာ၌လည်း သူနှင့်တစားပွဲတည်း ဖြစ်၏။ ကျောင်းဖွင့်စ နာမည် (၄)ဦးတွဲပေးရသောအခါ သူနှင့်အတူတွဲပေးရ၏။ သို့သော်လည်း သူက ကျွန်တော်တို့ကို ချာတိတ်ကလေးတွေဟု သဘောထား၏။ စင်စစ်လည်း ကျွန်တော်က သူ့ထက် အတော်ငယ်၏။
တွေ့စက ကျွန်တော့်ကို `ခင်ဗျား ကဗျာတွေ ရေးနိုင်သားပဲ´ဟု ခင်ဗျားနှင့်ကျွန်တော်နှင့် ပြောပြီးနောက် ရင်းနှီးလာသောအခါ သူက ကျွန်တော့်ကို မင်းနှင့်ငါနှင့် ပြောလာ၏။ သူက လူကြီးအနေနှင့် စကားပြောလေ့ ရှိ၏။ ကျွန်တော့်ကို သူက အမြဲနိုင်တတ်၏။ တခါ တခါ နေ့လည်စားချိန်တွင် ကျွန်တော့်အတွက် ကိတ်မုန့်ကို သူက ယူစားပြီး ရယ်မောကာထွက်သွားတတ်၏။
သူနှင့်ကား ဆဲမနာ၊ဆိုမနာ ခင်မင်ရင်းနှီးသည်ဟု ဆိုနိုင်၏။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ကသာ အဆဲခံရ၏။ ကျွန်တော်၏နာမည်ကို မခေါ်၊ `ဟေ့ – ခွေးသား´ဟု နှုတ်ဆက်လေ့ ရှိ၏။ သို့သော် သူ့ကွယ်ရာတွင်မူ ကျွန်တော်တို့က `ဗဆွေကြီး´က ဘယ်သို့ ဘယ်ညာစသည်ဖြင့် သူ့အတင်းကို ပြောလျက်ရှိကြလေသည်။
ကျွန်တော်နှင့်အတူ ပဋ္ဌမနှစ်ဥပစာတန်းသားများရှိ၏။ သူ့ကို အမြဲနောက်လေ့ရှိ၏။ နေ့လည် သူအိပ်နေလျင် တံခါးကိုပုတ်ကာ ထွက်ပြေးကြ၏။ သူမရှိခိုက် သူ့အခန်းမှ ဘရိုမိုစက္ကူခွေများကိုဆွဲထုတ်ကာ ကော်ရစ်ဒါတွင် အရှည်ကြီးပတ်ထား၏။ ဒါမှမဟုတ်လည်း သွားတိုက်ဆေးကို အကုန်ညစ်ထားခဲ့၏။ သူကား ကျွန်တော်တို့ကို တဆဲတည်း ဆဲလျက်ရှိ၏။
ကိုဗဆွေသည် ပိုကာကစားလေ့ ရှိသည်။ မြို့ထဲမှ သူ့ ရိုသေလေးစားသော နိုင်ငံရေးသမား သခင်များ လာမေးလျှင် ကျွန်တော်တို့က သူ့ကိုခေါ်မပေးဘဲ သူဖဲရိုက်နေသည့်အခန်းသို့ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင် သွားတတ်ကြ၏။ သူကား မျက်စောင်းတခဲခဲနှင့်ရှိနေ၏။ ကျွန်တော်တို့ကား ပျော်နေကြ၏။
ကိုဗဆွေသည် သူ့အခန်းတွင် နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ဆွေးနွေးလျက်ရှိစဉ် ကျွန်တော်တို့က သူ့အခန်းဝသို့ လာကာ `ကိုဗဆွေကြီး ကျွန်တော်တို့ အကြွေးဆပ်ဦးဗျာ´ဟု မရှိသော အကြွေးကိုတောင်းလေ့ရှိ၏။ ဒါနှင့် နောက်လွန်းပြောင်လွန်းသဖြင့် စိတ်ညစ်လာသလားမသိ၊ တညနေတွင် ကျွန်တော်တို့ထံသို့လာကာ `ငါ စကားကောင်းကောင်း ပြောချင်တယ်ကွာ၊ လာကြပါအုံး´ ဟု ခေါ်၏။ ကျွန်တော်တို့က ပြုံးဖြီးဖြီးနေရင်းက သူ၏မျက်နှာပျက်နေပုံကို မြင်မှအရှိန်သတ်ကြ၏။
`ငါ တည်တည်ပြောချင်တယ်။ မင်းတို့တတွေ နောက်တာပြောင်တာဟာ တဆိတ်လွန်နေပြီကွ…´
ကျွန်တော်တို့ကား သူ၏တောင်းပန်စကားများကို မနဲအောင့်ကာ နားထောင်နေကြရ၏။ စိတ်ထဲမှာကား ရယ်ချင်နေ၏။ ဒါနှင့်(၂) ရက်လောက် ခပ်တန်းတန်း ဖြစ်သွားကြ၏။
နောက်တနေ့တွင်ကား ကိုဗဆွေသည် စုဝေးလျက်ရှိသော ကျွန်တော်၏အခန်းသို့ ဘွားကနဲပေါ်လာကာ ပြုံးလျက် `ဟေ့ ခွေးသားတွေ ကိုယ် ဆာတယ်ကွာ၊ သမဂ္ဂပျော်ပွဲစားရုံမှာ ခေါက်ဆွဲကြော်ကျွေးကြစမ်း ….´ဟု ပြောနေလေသည်။
စင်စစ် သူသည် ကျွန်တော်တို့နှင့်ကြာရှည်မခေါ်ဘဲ မနေနိုင်ပေ။ ကျွန်တော်တို့နှင့်မှပဲ သူပျော်သည်။ ကျွန်တော်တို့မရှိလျှင် သူမနေတတ်။
ထိုနှစ်က သူသည် တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂတွင်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်နေပေသည်။ သမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌမှာ ယခု တရားရေးဌာန ၀န်ကြီး ဦးဘဂျမ်း ဖြစ်၏။
သူသည် ဥပစာတန်းများကို မကြာခဏလစ်ကာ သမဂ္ဂအသင်းတိုက်တွင်သာ အနေများ၏။ သမဂ္ဂလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်တို့ထံ မကြာခဏအပူကပ်၏။ အလှူငွေကောက်ခံစရာ၊ အမျိုးသားနေ့အတွက် လူစုစရာရှိလျှင် ကျွန်တော့်ထံလာ၍ `လုပ်ပါဦးကွ´ဟု ဆိုလေ့ရှိ၏။
ကိုဗဆွေသည် ကော်ရစ်ဒါတွင် ပက်လက်ကုလားထိုင်တလုံးနှင့်ထိုင်ကာ အင်္ဂလန်လက်ဝဲစာအုပ်အသင်းမှ စာအုပ်ထူထူများကို ဖတ်နေသောအခါ ကျွန်တော်က အပါးကပ်ပြီး `ခင်ဗျားစာအုပ်ထူလှချေကလား။ ခင်ဗျားပြီးအောင် ဖတ်ရဲ့လားဗျ´ဟု ပြောင်လေ့ရှိ၏။ သူ၏အခန်းထဲတွင် မာ့က်စ်စာပေများတွေ့ရ၏။ စာအုပ်အပေါ်ဆင့်တွင် ခေတ်ဆန်းကဗျာ စာအုပ်လည်းရှိ၏။
သူသည် သပ်သပ်ယပ်ယပ် နေတတ်သူမဟုတ်။ သူ၏ အခန်းကား အပေါစားပြည့်တန်စာမ၏အိပ်ခန်းကဲ့သို့ ဗလပွ၊ အရာအားလုံးတို့သည် ပြန့်ကြဲကာ မသဲမကွဲ ဖြစ်နေကြ၏။
ဆေးလိပ်ပြာတို့သည် ငွေရောင်ယှက်သန်းလျက် ရှိ၏။ ရှုပ်ပွေညစ်ပတ်ပုံ၌ ညိုမြနှင့် ပြိုင်နေ၏။
စင်စစ် သူ၏မိဘများသည် သတ္ထုတွင်းများပိုင်သော မြေပိုင်နှင့်သူဌေးများဖြစ်သည်ဟု သိရ၏။ သို့သော် လူလတ်တန်းစား၏ ပြောင်လက်တောက်ပခြင်း မရှိ။ ဧည့်ခန်းဆောင်ရှိ လူဂုဏ်တန်ဟန်မျိုး မဟုတ်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း။ သူ၏ တောင့်တင်းမြင့်မားသော ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်မှာ ယောင်္ကျားပီသ၍ ကြည့်ကောင်းသူ တယောက်ဖြစ်၏။ ကျမ္မာသန်စွမ်းခြင်းမှာ ပေါ်လွင်လျက် ရှိ၏။ ဖျဉ်အင်္ကျီနှင့် ထားဝယ်လုံချည်အနီ ကြူထရံကွက်ကို ၀တ်လေ့ရှိသည်။
သူသည် ခေတ်စမ်းကဗျာစာအုပ်ကို စွဲလမ်းစွာဖတ်သူဖြစ်၏။ တိုတိုနှင့်လိုရင်းကို အဓိပ္ပါယ်ပေါ်လွင်စွာရေးသော ခေတ်စမ်းစာပေကို သူသည် နှစ်သက်၏။ ကဗျာနှင့်ပတ်သက်၍ စကားစပ်တိုင်း မင်းသုဝဏ်နှင့်ဇော်ဂျီ၏ကဗျာများကို ထောက်ပြလေ့ရှိ၏။ မင်းသုဝဏ်၏ `တရားဦး ဟောလှည့်ပါ´ကို သူ အတော်ကြိုက်ပုံရ၏။
သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘားမားဂျာနယ်၌ ဆောင်းပါးများရေးဖူး၏။ နံမည်အမျိုးမျိုးနှင့် ပြောင်းလဲရေးသဖြင့် မေ့နေပြီ။
၁၉၃၇ တက္ကသိုလ်နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်း၌ `ဘိုထူး´အမည်ရှိသော တောဝတ္ထုတပုဒ်ကို ဖတ်ရဖူး၏။ သူသည် တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်၊ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းမန်နေဂျာ လုပ်ခဲ့ဖူး၏။ သူသည် အရင်းရှင် လူမှုဆက်ဆံရေးစနစ်ကိုပြက်ရယ်ပြုသောစာပြောင်များ ရေးလေ့ရှိသည်။
ညိုမြ အယ်ဒီတာလုပ်သောနှစ်က အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းတွင် `သူတို့ဝါဒ´အမည်ရှိ စာပြောင်ဝတ္ထုတခု ပါလာ၏။
သူ့ဝတ္ထုထဲတွင် အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရိ `ကက်သရင်း ဂွက်ထော်´သည် အိုင်စီအက်ဖြေနေသူ ကျောင်းသားတဦးကိုအမိဖမ်းကာ နောက်ဆုံး ထိုသူမှာ အိုင်စီအက်မအောင်ဘဲ သူမမှာသာလျှင် ထိုသူထံမှရသော တက်ခေတ်နတ်ဆိုးရောဂါအမွေရကာ ဆွေးကျန်ရစ်လေသည်။ ညစ်တော့ ညစ်ညမ်း၏။ ကျောင်းတွင် ခပ်ပျံပျံနေသော ရှေ့က အင်္ဂလိပ်နာမည်နှင့် ဗိုလ်ဆန်ဆန်ကလေးများကို ပြောင်လှောင် ထားလေသည်။ သူသည် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကိုမလေးစားဘဲ နိုင်ငံခြားကိုချည်းအားကိုးကာ အတုခိုးခြင်းကို မုန်းတီးခဲ့၏။
နောက်သူသည် ဂျပန်ခေတ်တွင် မိန်းမရသောအခါ ကွန်ဗင့်ကျောင်းထွက် `နန်စီ´ အမည်ရှိ ခေတ်ဆန်ဆန် ကလေးနှင့် ရလေသည်။ ကျောင်းတုန်းက သူရေးခဲ့သောစာပြောင်များကို ပြေး၍သတိရလိုက်၏။
နောက်နှစ်များ၌ကား ကိုဗဆွေနှင့်ကျွန်တော်သည် ဝေး၍ နေခဲ့၏။
ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂတွင်ရှိသောနှစ်က သူသည် ကျောင်းထွက်နေလေပြီ။ ကျွန်တော် ကျောင်းမှထွက်သော ၁၉၄၁ – ခုနှစ်က သူသည် ကျောင်းသို့ပြန်လာကာ တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂတွင် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေလေသည်။
စစ်ဖြစ်သည့်နှစ်က သူသည် နဂါးနီအယ်ဒီတာ ကိုထွန်းရွှေနှင့်အတူ ဂျပန်ပြည်သို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၀င်များနှင့်သခင်များကို လျှို့ဝှက်၍စေလွှတ်ရေးကို စီမံလျက်ရှိနေ၏။ သခင်မြနှင့် တွဲနေသည်ကို တွေ့ရတတ်၏။
နောက်ကား သူနှင့်ကျွန်တော် အတော်ပြတ်နေကြ၏။ သူသည် ဂျပန်တခေတ်လုံးနှင့် တော်လှန်ရေးအထိ ဆက်လက်ကာ နိုင်ငံရေးလုပ်လျက်ရှိ၏။ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ဖ ဆ ပ လ မှ ထုတ်ပယ်လိုက်သောအခါ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီသည် ထင်ပေါ်စပြုလာရ၏။ ထိုအခါ ကိုဗဆွေ၏နံမည်သည်လည်း သတင်းစာ ခေါင်းစဉ်များတွင် မျက်နှာမဲနှင့်ပါလာလေပြီ။
သူသည် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသာမဟုတ်၊ ဖ ဆ ပ လ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးလည်း ဖစ်ကာ ယခုလက်ရှိ အရေးပါသောနေရာတွင် ရောက်နေ၏။ သူ့ကို အထင်ကြီးသူတွေ ပေါများလာ၏။`ဦးဗဆွေ´ဟုခေါ်ကာ လေးစားသူတွေရှိလာ၏။
ကျွန်တော့်အဖို့ရာကား အတော်ခက်နေ၏။ သူ့ကို ဘယ်လိုမှအထင်ကြီး၍ မရ။ မာ့က်စ် လီနင်ဝါဒ သဘောတရားတွေ အဘိဓမ္မာ၊ ဘောဂဗေဒပါ အကုန်အရေကျိုသောက်ထားသူ ပညာကျော်တဦးအနေဖြင့် မမြင်။ တော်တော်ခက်နေ၏။
တည ဂလုပ်ရုံတွင် သူနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲ သွားတွေ့၏။ သူသည် လူကြားထဲမှ ကျွန်တော့်ကိုလှမ်း၍ နှုတ်ဆက်လိုက်၏။
ကျောင်းတုန်းကကဲ့သို့ပင် ရွင်လန်းသောအပြုံးဖြင့် တောက်ပ၏။ ကျောင်းတုန်းကကဲ့သို့ပင် ကြူထရံအကွက် ထားဝယ်လုံချည်နှင့်၊ သို့သော် ပြာပြာသလဲမရှိ၊ အမူအယာမှာ ဂမူးရှူးထိုးမဟုတ်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေးနှင့် တည်ငြိမ်နေ၏။ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံ၏ ဖုထစ်ချိုင့်ဝှမ်းများဝယ် ဒရွတ်တိုက်ကာ ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက် အနယ်ထိုင်၍ ထုသားပေသားကျနေဟန် ရှိ၏။
သူ၏အပြုံးကား ကျောင်းတုန်းကကဲ့သို့ပင် လွယ်ကူလျော့ရဲခြင်းမရှိတော့ဘဲ လေးနက်လာ၏။ နက်ရှိုင်း လာသည်ဟု ထင်မှတ်ရ၏။
သူ၏အပြုံးနောက်၌ ဘာရှိလိမ့်မည်ကို မှန်းဆရန်ခက်၏။ နိုင်ငံရေးပရိယာယ်လား၊ ဖုံးကွယ်ခြင်းမရှိသော နှလုံးသားလား၊ သို့မဟုတ် ဒိုင်းနမိုက်စနက်တံလား၊ ဒါကို မြင်ရန်ခက်၏။
သူ၏အပြုံးသည် အချိုင့်အဖေါင်း မရှိ။ တပြေးတည်းညီကာနေသဖြင့် အကဲခတ်ရန် ခက်လှ၏။
နိုင်ငံရေးလောက၌ သူ့ကို `ကျားကြီးဗဆွေ´ဟု ခေါ်ဝေါ်လေ့ ရှိကြ၏။ ကျွန်တော်ကား ကိုဗဆွေကို ဘာကြောင့် ကျားကြီးဟုခေါ်ရသည်ကို အစဉ်းစားရကြပ်နေ၏။
ထက်မြက်သောသတ္တိအဟုန်ကြောင့်လား။ ဒါမှမဟုတ် ကျားကဲ့သို့ ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရာ၌ ဟုတ်ကနဲပေါ်ကာ အုပ်တတ်၍လား။ လေးစားစရာကောင်း၍လား။ ကြောက်စရာကောင်း၍လား။
လွန်ခဲ့သော (၅)လခန့်က တာရာအမှတ်(၄)တွင်ပါသော သခင်သန်းထွန်းဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးစ စာပေသမားတဦးက `နောက်အပတ် ဘယ်သူ့အကြောင်းရေးဦးမလဲ´ဟု ကျွန်တော့်ကို မေးဖူး၏။
`ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက ကိုဗဆွေအကြောင်းရေးမလားလို့ စိတ်ကူးမိတယ်´
`ကျုပ် အရင်ဆုံး ပြေးဝယ်မယ်ဗျာ၊ သိပ်သိချင်နေတာ´
မနေ့ တနေ့က ထိုသူနှင့်ပင်သွားတွေ့၍ တာရာမဂ္ဂဇင်းအကြောင်းရောက်သွားရင်းက ယခင်ကဲ့သို့ပင်မေးရင်း `ကိုဗဆွေအကြောင်း ရေးရမယ်´ဟု ဖြေသောအခါမူ သူ၏လေသံမှာ ပြောင်းသွားလေပြီ။
`ဆိုရှယ်လစ်ပါတီက ကိုဗဆွေလား။ ဆိုရှယ်လစ်ဆိုရင်တော့ မဖတ်ချင်တော့ဘူးဗျာ၊ အမြင်ကပ်တယ်´
သူ၏မျက်နှာသည် ရှုံ့မဲ့သဖြင့် တွန့်နေ၏။
`ခင်ဗျား အရင်တခါပြောတော့ ကိုဗဆွေအကြောင်းရေးရင် ပြေးဝယ် ဖတ်မယ်ဆိုဗျ´
`ဟုတ်လား….ကျွန်တော် ပြောမိသလား …. ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူးဗျာ´
သူသည် နဖူးရေတွန့်ကာတွေဝေနေစဉ် ကျွန်တော်ကား ရယ်မောမိလေသည်။
ကိုဗဆွေသည် ငေးနေသောကျွန်တော့်ကို ပခုံးပုတ်ပြီး `တာရာလဲ ငါမဖတ်ရတာ(၂) လလောက် ရှိသွားပြီထင်တယ်။ ပေးစမ်းပါဦး´ ဆိုကာ ပြုံးနေလေသည်။
ကျွန်တော်လည်း သူနှင့်အတူ ဂလုပ်ရုံမှ အပြင်သို့ထွက်ခဲ့ကြသည်။
သူ၏ နောက်နားတွင်ကား ခေတ်ဆံဆံ အရပ်မြင့်မြင့် တောင့်တင်းသော သူ၏ဇနီးသည်ကလေး၏ အပြာနုရောင်သည် ကပ်ပါလာ၏။
ကိုဗဆွေကို ဘယ်လိုမှအထင်မကြီးသောစိတ်နှင့်ပင် ပြည်သူ့စာပေတိုက်၌ သူနှင့်စကားပြောနေစဉ် နယ်မှ ပါတီခေါင်းဆောင်များ ရောက်လာ၏။ သူ့ကို အရိုအသေပေးကာ တွေ့ဆုံ၏။ ကိုဗဆွေသည် သူတို့နှင့် အတော်ကြာစကားပြောနေသည်။
သူ၏လေသံမှာ တည်ငြိမ်ပြီး လေးနက်သည်။ နယ်မှ အခက်အခဲများကို သူက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ ရှင်းလင်းပေးလိုက်သည်။ ပြဿနာတရပ်သည် ကျွန်တော့်ရှေ့မှာပင် ပြေလည်သွားပေပြီ။ သူ၏ ရှိုက်ဖွာနေသော စီးကရက်မီးခိုးများသည် တဖြည်းဖြည်း ယှက်လိမ်ကွေ့ကောက်နေရာမှ ဆန့်ကား ပြေသွားလေပြီ။
လူအများက သူ့ကိုလေးစားခြင်းကိုတွေ့ရတော့မှ ကျွန်တော် သူ့အား အထင်မကြီးနိုင်သည့်အချက်ကို သိမြင်လာ၏။ လွန်ခဲ့သော (၁၀)နှစ်ခန့်က သူနှင့် ခင်မင်တုန်းက သူသည် ဥပစာအထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းသား၊ နိုင်ငံရေးသမားပေါက်စ၊ သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်မျှသာ ရှိသေးသည်။ ကျွန်တော်တို့နှင့် နောက်ဘက် ပြောင်ဘက်၊ ထို့ကြောင့် သူ့ကို အမှတ်တမဲ့ နေခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် သူ၏ နိုင်ငံရေးသက်တမ်းကား (၁၀)နှစ် အတွင်း ကြီးရင့်လာခဲ့ပေပြီ။ စစ်ဖြစ်စက တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ကျောင်းသားများကို စည်းရုံးခဲ့၏။ ဂျပန်သို့ လျှို့ဝှက်စစ်ပညာသင် လွှတ်ရေးအတွက် ရှေ့ဆောင်ခဲ့၏။ ထိုနောက် မြေအောင်းတော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့၏။ ဂျပန်ခေတ်ကလည်း ကေဘိုတိုင် ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် တွေ့ရ၏။ မတ်လတော်လှန်ရေးတွင် ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အလံတော်အောက်ဝယ် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးကို ပြုခဲ့သည်။
ယခုခေတ်တွင် ပြည်သူက ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ဗမာပြည်ကြီးကိုဖန်တီးလျက်ရှိနေသော ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်နေလေပြီ။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ၏မဏ္ဍိုင် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်ပေသေးသည်။ သို့သော် ကျောင်းမှာတုန်းက ကဲ့သို့ပင် ထယ်ဝါခြင်း၊ ပလွှားခြင်းကို သူ့၌ မတွေ့ရ။ ကျောင်းမှာတုန်းကကဲ့သို့ပင် မထေမဲ့မြင် မထီလေးစား နေတတ်သည်။
မီးထွန်းပွဲ ညတညက သူနှင့်ဗိုလ်မှူးအောင်သည် လမ်းထဲရှိအငြိမ့်ပွဲသို့ လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ အိမ်ရှေ့မှဖြတ်သွားစဉ် သူ၏ မေ့ပစ်၍မရသော မြင့်မားတောင့်တင်းသည့်ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကြီးကို အတူနေသူ မောင်စည်သူက လှမ်းမြင်လိုက်သည်။
“ဗဆွေကြီးနဲ့ တူတယ်ကွ။ ပခုံးစောင်းပုံကတော့ သူ့ဟန်ပဲ”
ကျွန်တော်တို့လည်း ကပျာကယာထလိုက်ကြရာ အငြိမ့်စင်နားတွင် သွားတွေ့သည်။ ကိုဗဆွေမှာ အံ့အားသင့်နေသည်။ သူတို့ နှင့်ယောက်စလုံး လက်တိုရှပ်အင်္ကျီနှင့် ချည်လုံချီနှင့်။ သာမန်ပွဲကြည့်ပရိသတ်ထဲတွင် ရောနှောလျက် ရှိနေသည်။
ဗိုလ်မှူးအောင်က ပြုံးကာ“ကျုပ်တို့လဲ တခါတခါ လူနဲ့သူနဲ့ ကြားထဲမှာနေချင်တာပဲ” ဟုဆိုသည်။
စာပုံနှိပ်စက်တွေ တက်ဖျက် ကတည်းက တိုင်းပြည်ကမေတ္တာထားနေသော ဆိုရှယ်လစ်ပါတီခေါင်းဆောင် တဦးသည် လက်နက်ကိုင်အစောင့်မပါဘဲသွားရဲသည်ကို အံ့သြမိ၏။
ကိုဗဆွေသည် ကျောင်းမှာတုန်းက အမ်းစထရွန်းရေးသော (၀ံပုလွေ) စာအုပ်ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖတ်သည်ကို သတိရမိ၏။ သူသည် ထိုစာအုပ်ကို အတော်နှစ်သက်သည်။
ထိုစာအုပ်ကား တူရကီအာဏာရှင် အတာတပ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်သည်။ ရေးပုံမှာ ခေတ်ဆန်၍ အတာတပ်၏ မထေမဲ့မြင်သဘောကလေးများ၊ ဘာကိုမှဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်ချင်လျှင်တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်သည့် အဖြစ်အပျက်များကို ဖေါ်ပြထားသည်။
အတာတပ်သည် အပေါစားပြည့်တန်ဆာမအိမ်များတွင် အိပ်ခဲ့သည်။ ညကြီးသန်းကောင်ထပြီး သေနတ်ဆွဲကာ စစ်တိုက်ချင်လျင် တိုက်သည်။ အတော် သူရဲကောင်းဇာတ်လိုက်ဆန်သော ဘ၀ဖြစ်သည်။ အတာတပ်သည် အနောက်တိုင်းဆံဆံ ပညာတတ်မကလေးနှင့် တွေ့ပုံလည်းပါသည်။
ကိုဗဆွေကား သူအိပ်မက် မက်ချင်လည်းမက်ခဲ့မည်ဖြစ်သော၊ သူ အင်မတန်စွဲလမ်းသည့် အတာတပ် အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ထဲမှ “၀ံပုလွေ” ကား ဖြစ်မလာ။ ကျားကြီးကား ဖြစ်လာပေပြီ။ ၀ံပုလွေသည် ခေတ်သစ် တူရကီပြည်ကြီးကို ထူထောင်ခဲ့၏။ ကျားကြီးကား … ကျားကြီးကား ….
ပြည်သူ့စာပေဗဟိုဋ္ဌာနတွင် တွေ့စဉ်က၊ ကျွန်တော်က ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်ပူးပေါင်းရေး၊ တကယ့် အမျိုးသားတပ်ပေါင်းချုပ်ဖွဲ့စည်းရေးတို့ကို တတွတ်တွတ်ပြောနေစဉ် ကိုဗဆွေကား စီးကရက်ကို ဖွာကာ ပြုံးလျက်ရှိသည်။
“လက်ဝဲညီညွှတ်ရေးကို ဒို့လဲ ကျိုးစားခဲ့တာပဲကွ။ မလွယ်ဘူး”
“ဘာဖြစ်လို့ မလွယ်ရမှာလဲဗျာ၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်းရေးကြီးကို အတူလက်တွဲပြီးပြုခဲ့တဲ့ ဗမာ့တပ်မတော် (ယခု ပြည်သူ့ရဲဘော်)၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဖြစ်လာမယ့်အရေးတော်ပုံပါတီ၏အမြုတေတို့ဟာ ဘာဖြစ်လို့ မပေါင်းနိုင်ရမှာလဲ။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကိုလုပ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးရလာမှ တယောက်နဲ့တယောက် မုန်းတီး၊ တိုက်ကြခိုက်ကြဆိုတာ သိပ်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းနေတယ်…” စသည်ဖြင့် ကျွန်တော်က လျှောက်ပြော၏။
“သခင်စိုးတို့၊ သခင်သန်းထွန်းတို့ဟာ ညစ်ပတ်တယ်ကွ”
“ဒါကတော့ ထင်မြင်ချက်မျှသာ ဖြစ်တာပဲ။ သူတို့မှာရှိတဲ့အရည်အချင်းမျိုး ခင်ဗျားတို့မှာ မရှိ၊ ခင်ဗျားတို့ လုပ်နိုင်တာ သူတို့မလုပ်နိုင်၊ အဲဒီလို ဖြစ်နေတာ။ တကယ့်အရေးမှာ အရည်အချင်းတွေစုပေါင်းပြီး တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်စေချင်တာပဲ။ အဲဒါဟာ လက်ဝဲညီညွှတ်ရေးပဲ။ နို့မဟုတ်ရင် တိုင်းပြည်ဟာ မျောမှာပဲဗျ”
"စင်စစ်တော့ကွာ … သခင်စိုးတို့သခင်သန်းထွန်းတို့ဟာ ငါတို့ဘုရားတွေပါပဲကွ။ ငါ့ဆရာတွေပါပဲ။ နဂါးနီ စာအုပ်အသင်းကို အတူထောင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ …” ဟု ကိုဗဆွေသည် စာရေးစားပွဲပေါ်တွင် တင်ပလွဲထိုင်နေရာမှ အနည်းငယ်ရွှေ့ကာ ပြောသည်။
“နောက်ပြီး … ပါတီသန့်ရှင်းရေးဟာလဲ အရေးကြီးတယ်ဗျ”
ခက်တာက ပါတီလူစုခြင်းသည် အစိမ်းသူရဲမွေးတာနဲ့ တူနေသည်။ ကိုယ့်ပါတီအားရှိရင်ပြီးရောဆိုကာ တွေ့ကရာလူတွေ လက်ခံခဲ့ကြ၏။ အာဏာရလာတော့ ရာထူးလိုချင်သူ များလာ၏။ ဂျပန်အဓိပတိခေတ်က ကဲ့သို့ ဆိုက်ကားသမားက မြိုhအုပ် တက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေသည်။ နောက်, အထက်က မကောင်းမှန်း၊ ဆိုးမှန်းသိလာတော့လည်း ကိုယ့်လူတွေ ဖြုတ်ချပစ်ဖို့ ခက်နေသည်။ သည်လူတွေပင် ကိုယ့်ကို မဲပေးနေ သကော။ ကြာတော့ အပုပ်နံ့လှိုင်လာကာ ပြည်သူကနှာခေါင်းရှုံ့လာတော့သည်။
“ပြောတော့ လွယ်တယ်ကွ။ ငါလဲ ပါတီသန့်ရှင်းရေးကို ကြိုးစားတာပါပဲ။”
“ကျွန်တော်တော့ ကွန်မြူနစ်တွေဟာ ခင်ဗျားတို့ထက်သန့်တယ်လို့ ထင်တာပဲ”
“မင်းက သန်းထွန်းလူလား” လို့ ပြုံးကာ နောက်လိုက်ပြီးမှ “ငါတို့က အာဏာရတဲ့ပါတီဆိုတော့ ၀င်ချင်တဲ့ လူချည်းပဲကွ။ သန့်လို့ မရဘူး။ ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ တိုက်ပွဲကိုလုပ်နေတဲ့ပါတီဆိုတော့ သန့်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ တိုက်ပွဲလုပ်နေတာကိုက သန့်နေတာပဲ။ တကယ်မယုံဘဲနဲ့ ၀င်မတိုက်ဘူး …”
နောက် ကျွန်တော်က ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို ဆက်လက်ပြောပြန်သည်။
“ခက်တာပဲဗျာ ခင်ဗျားတို့တတွေ တိုက်ကြခိုက်ကြ လုပ်နေကြတာနဲ့ပဲ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို ဘာမျှမလုပ်နိုင်ဘူး။ အမျိုးသားပြတိုက်တို့၊ ပန်းချီပြခန်းတို့ ဘယ်မှာရှိသလဲ။ ယဉ်ကျေးမှုမှာ ဘာများ အာရုံစိုက်စရာ ရှိသလဲ။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ဘာများလုပ်နိုင်သလဲ။”
ထိုအခိုက် သူဖတ်ပြီးခဲ့သော မာက်စ်စာအုပ် တထပ်ကြီးကို ပြည်သူ့စာပေသို့ပြန်ပေးရန်အတွက် စာပွဲပေါ်သို့ တင်လိုက်သည်။ မာက်စ်၊ လီနင်၊ စတာလင်တို့ရေးသော စာအုပ်များဖြစ်သည်။ ကျောင်းတုန်းကဆိုလျှင် “ခင်ဗျား ကုန်အောင်ဖတ်ရဲ့လား”ဟု နောက်မိမည် ဖြစ်၏။
“အင်တီဒူးရင်းစာအုပ်ဟာ အတော်ကောင်းတာပဲ၊ အကိုးအကားတွေနဲ့ တခါထဲ ချေပထားပုံတွေဟာ”
ထိုနောက် ခေတ်ပေါ် ဗမာစာပေအကြောင်း ရောက်သွားပြန်သည်။ တိုးတက်စာပေ၊ ဂေါ်ကီ၏ ၀တ္ထုများ၊ ဘော်လဇက်၏ နင်နာဝတ္ထု၏ လူမှုဆက်ဆံရေး ….. နောက်ဆုံးဝယ် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကို လုပ်ခဲ့သူများပါဝင်သော ညီညွှတ်ရေးတပ်ပေါင်းချုပ်။
ကိုဗဆွေကား နောက်တွင် ဘာရှိမည်ကို မမှန်းဆတတ်နိုင်သော သူ၏အပြုံးဖြင့်သာ နားထောင်နေပေသည်။